चिन्ताबाट मुक्त हुने मेरा तीन कदमहरु, जुन तपाईंलाई पनि काम लाग्न सक्छन्
जीवनमा सबैले कुनै न कुनै दिन चिन्ताको महसुस गरेकै हुन्छन्। भनिन्छ, चिन्ताले मानिसलाई चिताको बाटोमा पुर्याउँछ। चिन्तालाई समाधान गर्ने सबैका आ-आफ्नै तरिका हुन्छन्। सबैलाई तनाव लिएर बाँच्न कठिन नै हुन्छ। बिना चिन्ता बाँच्नु नै सफल र सुखी जीवन मानिन्छ। आउनुहोस्, म तपाईंलाई यस्ता तीन कदम बताउँछु, जुन म सदैव प्रयोग गर्छु र सफल हुन्छु। पहिलो कदम – सर्वप्रथम […]
किन बोल्छन् मानिसहरु झुट ? झुट बोलेको कसरी थाहा पाउने ?
भनिन्छ शत्य भन्दा झुट मिठो हुन्छ केही समयको लागी। मानिसलाइ झुट बोल्न सजिलो हुन्छरे। शत्य अलि तितो नै हुन्छ। शत्य कुरा प्रकटगर्न मानिसलाइ अलिक गाह्रो पर्छ। किनत ? किन पर्छ त्यस्तो गाह्रो शत्य बोल्न? किन बोल्छ मानिसहरुले झुटो ? जो मानिसहरु बर्तमान या क्षणिक समयमा रमाउन चाहन्छ, उस्लाइ भविश्यको कुनै चिन्ता छैन त्यस्ता मानिसहरु अक्सर […]
सधै बच्नुस् यस्ता आँखा हुनेसँग
सधै बच्नुस् यस्ता आँखा हुनेसँग ! आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो जुन दृष्टिको काममा आँउछ। भनिन्छ जो कसैलाई पनि आँखामा गहिरो गरी हेर्यो भने सम्पूर्ण ब्यक्तित्व आँखाबाटै बुझ्न सकिन्छ । भनिन्छ आँखा मनको ऐना हो । समुन्द्र शास्त्रमा अनुसार आँखाको बनौटबाट नै ब्यक्तिको गुण दोष थाहा पाउन सकिन्छ । भनिन्छ एकै नजरमा माया बस्यो तर […]
संस्कृति र परम्परा जोगाउन पहिला पहिला सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु धेरै हुन्थे जसमा नेपाली पोशाकहरु लगाइन्थ्यो, नौमती बाजा बजाइन्थ्यो, नेपाली गीतहरु गाइन्थ्यो तर आजभोलि यस्तो चलन हराएजस्तो भको छ। म पनि यस्ता कार्यक्रमहरुमा सरिक हुन्थें। यस्तै क्रममा एक चोटि स्कुलहरुबिच जिल्लास्तरिय सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भयो। हाम्रो स्कुलले पनि भाग लिने भयो जसमा मलाइ मादल बजाउने जिम्मा दिइयो […]
के हो त बुद्धका चार आर्य सत्य जसले जीवन बदलिन सक्छ
शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धलाई नचिन्ने मानिसहरु संसारमा कमै होलान। हाम्रै देस नेपालमा जन्मिएका भएपनि हामीहरुलाई बुद्धको बारेमा पूर्ण ज्ञान नहुन सक्छ। हुनत बुद्धले जीवनका अनेकौं पक्षमा खोजगरि मानव जीवनलाई धन्य धन्य बनाएका छन्। वास्तवमा बुद्धको मार्गदर्शनलाई बुझनु आफैमा कठिन र बैज्ञानिक छ। उनले बताएका चार आर्य सत्यलाई बुझेर जीवनमा लागु गरेको खण्डमा हाम्रो जीवन सफल […]
एक अद्भूत मौनप्रेम कहानी
त्यो बाटुलो अनि हँसिलो अनुहार, ठुला काला आँखा, लामो कालो कपाल लाग्यो म कुनै चित्रकारको कला हेर्दैछु। अमृत साइन्स कलेजको कक्षा कोठामा पहिलो चोटि उनी सँग नजर जुधेको थियो। साच्चै कति मोहित पार्ने उनको रुप। पहिलो पल्ट देखे पनि बर्सौँदेखि परिचित जस्तो उनी सँग। त्यो उमेर न हो मनमा खैलाबैला मच्चिहाल्यो। क्लास सकेर घर फर्किएँ […]
चाणक्यका ६ नीतिहरु ख्याल राख्दा जीवनमा १ रुपैया पनि नोक्सान हुन्न ! चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । उनी कुटिल रणनीतिकार समेत थिए । उनले […]
पहिले जब ATM को प्रचलन थिएन तव घन्टौ लाईनमा बसेर पनि चेकको माध्यामबाट पैसा निकालेको अझै ताजै छ। त्यसबेला चेकबाट एकैचोटी महिना दिनलाई पुग्ने पैसा निकालिन्थ्यो तर अहिले हातमा ATM कार्ड छ र चाहिएको बेला कुनै पनि समयमा प्रयोग गरेर ATM मेसिनबाट तत्कालै पैसा निकालिन्छ। त्यसैले ATM निकै सजिलो र समय सापेक्ष भएको छ। कहिले […]
छोरी साटिएको १६ वर्षपछि थाहा पाउँदा
कुरो फ्रान्सको हो, करिब १५ -१६ वर्ष अगाडी एक गोरा दम्पतिको अस्पतालमा छोरी भयो। दम्पति दंग थिए तर बच्ची त्यति गोरी थिइन। समय संगसंगै बच्ची बढ्दै गई, उसको रुपरंग कालो हुदै गयो र कपाल खुङ्गरुङ्ग परेको। कुनै हिशाबले बच्ची गोराको बच्ची जस्ती थिइन। मानिसहरू कुरा काट्न थाले र केटाले श्रीमतीमाथि शंका गर्न थाल्यो तर श्रीमतिचाहिं […]
दारीवाल केटाको एकदिने डायरी “केटी हेर्न जाँदा”
मङ्गसिर देखी काठमाण्डौमा चिसो बढेकोले दारी नकाटेको करिव दुइ महिना भएछ। गोरो अनुहारमा झपक्कै आएको दारी लोभलाग्दो भयो हेर्दाहेर्दै। ऐना हेर्दा मन पर्न थाल्यो आफैँलाइ। साथिहरुलेपनि गज्जब छ भन्नथाले। सङ्गै पढेका महिला साथिहरुलेपनि दारी गज्जब छ भन्नथालेपछी झन् के चाहियो ? त्यसमाथी पनि फेसबुकमा यो दारी ग्याङमा पसेपछी दारी फाल्न पटक्कै मन लागेन। हुनत साथिहरुले […]
डाक्टर साबले मेरो खुट्टाको नशा हेर्दै सोधे ” तपाइको पेशा के हो ?” मैले भने ” शिक्षण ” । तब डाक्टर साब मन्द हास्दै भने ” एउटा जोक भन्छु ल ? ” चिन्तामा डुबेको मैले हुन्छ हुन्न केहि नभन्दै डाक्टर साब जोक सुनाउन लागे र त्यो जोक सुन्न सबै बिरामीका कानहरु डाक्टर तिर तानिय। जोक […]
हरेक मानिसले जान्नैपर्ने चाणक्यका दस उपदेश:
मानिसको मनमा विचारहरुको बर्षात हुनेगर्दछ प्रायगरी । विचारको बर्षात पछी यदी सो विचारहरुलाइ एकतृत गर्नसकियो भने महान विचार जन्मन्छ, सकिएन भने विचार छरिन्छ, सोच बदलिन्छ अनि मानिस अनिर्णयको बन्दी बन्दछ। मानिसले कतिकुरा जान्दैन भने कतिकुरा जानेरपनि ब्याबहारमा लागु गर्दैन। सिकाउन जती सहज छ, प्रयोग त्यती गाह्रो छ। सिग्रेट नपिउ भन्नेहरुनै सिग्रेट पिइदिन्छन् यहाँ । लोभ […]
किन गर्छन् सुसाइड मानिसहरुले ? कस्तो मानिसले सुसाइड गर्ने सम्भावना रहन्छ ?
भन्छन् जन्म र मृत्यु स्वयंसिद्द तथ्य हो जिवनको। जन्मे पछी मर्नु प्राणीहरुको प्राकृतिक नियम हो । जन्म र मृत्यु कती पिडादायक हुन्छ त्यो कसैलाइ अनुभव छैन । न त जन्मिएकाले आफ्नो जन्मदाको अनुभव सुनाउछन् न त मरेकाले। मरेर फेरी फर्केर आएँ भनेको सुन्न पाएको छैन। हुन त हिन्दु शास्त्रले ८४ लाख जुनी हुन्छ भनेको छ। […]
फेरी तयार रहौँ अर्को महाभुकम्पको लागी
सरकारले भुकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदैछ। त्योपनि धुमधाम सङ्ग। सायद लाखौँको खर्चमा हुनुपर्छ। १९९० सालको महाभुकम्पको सम्झनामा यो भुकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हुनुपर्छ सायद यो माघ २ गते। भनेपछी अब नेपाली जनताले बर्षको दुइ पटक भुकम्पको सामना गर्नुपर्ने भयो, त्यो पनि महाभुकम्पको। एउटा बैशाख १२ गते अनि अर्को माघ २ गते। त्यो हल्लैहल्लाको भुकम्प। त्यो […]
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ :हे अगत्स्य मुनि!….
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ : हे अगत्स्य मुनि! सृष्टिको सुरुवातमा केही पनि थिएन। समय पनि थिएन, स्थान पनि थिएन। मात्र शिव र शक्ति सँगै थिए। अचानक शक्ति चलमलाईन्, बोर लागेछ क्यार उनलाई! “ए हजुर! सुन्नुस् त!”,शिवजीको खुट्टा हल्लाईन्। परमानन्द स्वरूपमा निदाई रहेको बेलामा कसैले चलाएमा रिस त उठिहाल्छ नि! “हैन! के भो?”, झर्किलो स्वरमा आँखा मिच्दै […]
चोर्ने यो आधुनिक शैली, लिफ्ट दिँदा होस पुर्‍याउनुहोस् है
कुरा गरिसकेपछी मोबाइललाई ब्यागको पछाडीपट्टी राखेर बाइक स्टार्ट गर्नैलाग्दा एउटी युबती छेवैमा आएर भनिन् “एस्क्युजमी! हजुर कहाँसम्म जाने हो? “म बालाजु जानेहो, किन र?” “ए! उसोभए साह्रै राम्रो भयो, मलाइ नयाँबजार छोडिदिनुस्न प्लीईईईज्!”उनिले भनिन्। एक पटक सरसर्ती हेरेँ उनिलाइ। करिब २०-२२ बर्षकी जस्ती देखिन्थिन् तिनी। एस्सो हेर्दा साधारण जीवन शैलिकी लाग्थिन्। साँझको आठ बजिसकेकोथियो। यतिखेर […]
पृष्ठभूमि नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा सपना देखिरहँदा म हृदयदेखी सम्झना चाहन्छु तलको राष्ट्रिय गीतलाई एक पटक । छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेछु गीतकार तथा संगीतकार बिश्वनाथ वराल प्रेमले रचना र संगीत दिनुभएको तथा गायक शिशिर योगीले गाउँनु भएको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उत्कृष्ट राष्ट्रिय गीत सच्चा देशभक्त नेपालीको नशानशामा रगत […]
काठमाडौँको कम्पन शैली
देशको राजधानी हो काठमाडौँ। राजधानी भएपछि धेरै सहनु पर्छ काठमाडौँलाई। एक त देशभरिका मान्छेहरुको ओइरो र साथसाथै तिनीहरुका सपना, आकांक्षा, पूर्वाग्रहहरुको ओइरो र कम्पन पनि। पृष्ठभूमि: परापूर्वकालमा मन्जुश्रीले चोभारको नाक आफ्नो खड्गले काटी यो उपत्यकाको पानी बाहिर फालेका थिए रे। फलस्वरूप यो प्राचीन तलाउ मानव बस्तीको लागि उपर्युक्त थलो बन्यो रे। भगवान कृष्णले यो बस्ती […]
दलित कोटामा नाम निकाल्यो भन्दैमा दलित भन्न पाइन्छ ?
दलित कोटामा नाम निकाल्दैमा दलित भन्न पाइन्छ? “अब आएन्दा हामिलाइ दलित नभनियोस सर, यो अफिसमा धेरै भेदभाव बढेको छ, हामी दलित होइनौँ” “किन र सर? केभयो र ? कस्ले गर्यो त्यस्तो ?” “हिजो त्यहाँ बाहिर सबैले कुरा गर्दैथिए, त्यो दलित हो भन्दै मेरो नाम लिँदैथिए” “मतलव के तपाइँलाइ दलित भनेर तुच्छ ब्याबहार गरियो ? या […]
विमान अपहरणको दोषी मानिदाको त्यो क्षण
“Hey Nepali get up” भन्दै झक्झकाएर कराउँदै साथीले मेरो निन्द्रा त भङ्ग गर्यो नै साथै उस्को शब्दवाट म अचम्मित थिए । हुनत म नेपाली हुँ र यस्मा मलाई निसन्धेह गर्व छ तर पनि कुनै भारतिय साथिले यसरी मलाई सम्बोधन गरेका थिएनन् । कुरा २५ डिसेम्बर १९९९ को हो त्यस ताका म भारतको चेन्नैइमा SBOA school […]